स्मार्टफोन चलाउँदै हुनुहुन्छ ? - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
स्मार्टफोन चलाउँदै हुनुहुन्छ ?
-- नेपाली टाइम्स अस्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : आइतवार, चैत्र ४, २०७४
स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । हामीले स्मार्टफोन प्रयोगबारे केही त्यस्ता बानी विकास गरेका छौं, जसको ठोस अर्थ छैन । त्यसले केही फाइदा पनि गर्दैन । त्यसैले ती बानीबाट छुटकारा पाउनु नै उचित हुनेछ ।
ब्याकग्राउन्ड एपहरू बन्द गर्ने : ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एपहरू बन्द गर्ने हाम्रो बानी छ । वास्तवमा त्यसको कुनै खास अर्थ छैन । ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एपहरूले र्‍याम चलाइरहेको त हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड एप बन्द गर्दैमा त्यो समाप्त हुने होइन । ब्याकग्राउन्ड एपले समस्या ल्याउने भएको भए एप्पल र गुगलले त्यसको समाधानका उपाय ल्याइसक्थे ।
ब्याट्रीको अवधि बढाउन अँध्यारो थिम प्रयोग गर्ने : ओएलइडी वा अमोएलइडी स्क्रिनमा मात्र यसले काम गर्छ, किनभने यसमा हरेक पिक्सेलले आफ्नो लाइट प्रयोग गर्छ र कालो पिक्सेल बल्दैन । तर, बजारमा बिक्री हुने ९० प्रतिशत स्मार्टफोनहरूमा एलसिडी स्क्रिन हुन्छ, जसमा पूरै स्क्रिनले ब्याकलाइट पाइरहेको हुन्छ । पूरै कालो रंगको डिस्प्ले प्रयोग गरे पनि उत्तिकै मात्रामा ब्याट्री प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।
फोनलाई धेरै चार्ज हुने डर : स्मार्टफोनका ब्याट्री निकै आधुनिक भइसकेका छन् । ग्यालेक्सी नोट सेभेनको केही घटनाबाहेक स्मार्टफोनको ब्याट्रीमा खास समस्या छैन । लिथियमियन ब्याट्री चार्ज गर्दा तात्छन् । तर, यो सामान्य विज्ञान हो । मोबाइल फोन होस् वा ल्यापटप, जब ब्याट्री शत प्रतिशत चार्ज भएको छ र वाल सकेटमा जोडिएको छ भने ती साधनभित्र रहेको विद्युतीय सर्किटले ब्याट्रीलाई चार्ज हुनबाट रोक्छ ।
नयाँ फोनको ब्याट्रीलाई पूरै चार्ज गर्नुअघि चार्ज शून्यमा झार्ने: यसो गर्नु पनि अवश्यक छैन । पहिलेका निकेल क्याड्रिमयम ब्याट्रीहरूलाई चार्ज गर्नुअघि पूरै खाली गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने लियन र लिपोलिमर ब्याट्रीमा यो समस्या छैन ।
स्मार्टफोनमा स्क्रिन प्रोटेक्टर राख्ने: स्क्रिन प्रोटक्ेटरहरूले फोनको स्क्रिनलाई भद्दा देखाउँछ । फोन खसिहाल्यो भने स्क्रिन प्रोटेक्टरले शत प्रतिशत स्क्रिन जोगाउँछ भन्ने छैन । तपाईंको फोनमा पछिल्लो गोरिल्ला ग्लास स्क्रिन छ भने तपाईंले यसमा ती स्क्रिन प्रोटेक्टर राखेर ठूलै हानि गरिरहनुभएको छ ।
ओरिजिनल चार्जर प्रयोग नगर्नु : प्राविधिक रूपमा यसो गर्नु राम्रो हो तर, हरेकपटक फोन चार्ज गर्न ओरिजिनल चार्जर नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तपाईंले फोनको चार्जर हराउनुभयो भने, के गर्ने ? ओरिजिनल चार्जर महँगो हुनसक्छ । तर, राम्रो गुणस्तरको भरपर्दो फोन चार्जर अहिले इ–कमर्स साइटहरूमा पाइन्छ । ओरिजिनल चार्जर नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको भए पावर ब्यांकहरू सायदै उत्पादन हुन्थे ।
फ्री वाइफाईको काम छैन : कुनै कुरा नि:शुल्क छ भन्दैमा सुरक्षित छ भन्न मिल्दैन । डाटा र इन्टरनेटको शुल्क निकै सस्तो भइसकेको अहिलेको अवस्थामा जुन पायो त्यो नि:शुल्क वाइफाईमा फोन कनेक्ट नगर्नुस् । तपाईंको नेटवर्क ट्राफिकमा कसले ह्याक गर्न खोजिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ ।
एप्पलको नयाँ म्याकबुक
फेसबुकलाई महामारीमै फाइदा
३ महिनमा गुगलले आम्दानी कति ?
नेपालमा आजदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौं – नेपालमा बुधबारबाट देशव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अभियान...
नेपालमा कोरोनामुक्त हुने दर ९८ प्रतिशत बढी
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरसका ३३९ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा...
अस्ट्रेलियाले दियो फाइजरको कोरोना खोपलाई अनुमति
सिड्नी– अस्ट्रेलियाले फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रुपमा विकास गरेको कोरोना खोपलाई आफ्नो...
जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएका छौँ : मन्त्री ज्ञवाली
टेक्सस– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास...
नेपालमा ३३६ जना सङ्क्रमित हुँदा २२६ निको भए
काठमाडौं– नेपालमा कोरोना भाइरसका ३३६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा...
‘अष्ट्रेलियाको मिस नेपाल ओसिनियामा सिकेको कुरा मिस यूनिभर्स नेपालमा काम लाग्यो : अंशिका शर्मा, विजेता, मिस यूनिभर्स नेपाल– २०२०
काठमाडौं– करिव छ वर्षदेखि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी २४ वर्षीया अंशिका...
बेलायतमा नेपाली चिकित्सकलाई कोभिडविरुद्धको खोप
बेलायतमा आम मानिसमा कोभिड खोप लगाउन सुरु भएसंगै नेपाली चिकित्सकहरुले पनि कोभिडविरुद्धको...
पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनस्थित बागलुङका टंक सापकोटाद्वारा सञ्चालित इटालियन रेस्टुरेन्ट र्फोनो दि ओरोले...
काभ्रे सिपाली घर भई हाल विश्वभर रक्तदानबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएका रक्तदाता...
© 2017-2021 Nepali Times Australia All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology